Amakhasino weDebit Card - Amakhasino aseNingizimu Afrika aMukela Amakhadi eDebit
Ikhaya / Izindlela zokukhokha / amakhasino aku-inthanethi amukela amakhadi edebit
Amakhasino aku-inthanethi amukela amakhadi eDebit
Ukusebenzisa ikhadi le-debit ukudiphozitha imali ku-akhawunti yakho yasekhasino ye-inthanethi kulula. Asebenza njengamakhadi esikweleti, ngaphandle kokuthi esikhundleni sokusebenzisa imali obolekiswe yona, ungasebenzisa imali esivele ikhona ku-akhawunti yakho yasebhange. Aqale ukusetshenziswa ngonyaka ka-1970, amakhadi e-debit ayesebenza ngokuxhumana nama-akhawunti omuntu siqu njengamasheke. Ayeyisithembiso sokukhokhela umdayisi ngemuva kokudlula kwesikhathi.Kodwa manje, lawa makhadi adlulisa imali nge-akhawunti yakho ngokushesha futhi angenye yezindlela ezisheshayo neziphephile zokwenza izinkokhelo. Kunezinhlobo ezimbili ezahlukene zekhadi le-debit, ikakhulukazi, ikhadi le-Visa Electron kanye nekhadi le-Maestro lika-MasterCard.
Yimaphi amakhsino Ekhadi le-Debit esiwancomayo kubadlali base-SA ?
Dlala kunoma iyiphi ikhasino yaseNingizimu Afrika ebhalwe lapha bese usebenzisa ikhadi lakho le-debit ukudiphozitha imali ku-akhawunti yakho. Maningi kakhulu amakhasino ekhadi le-debit ahamba phambili ongakhetha kuwo ngakho-ke sibhale uhlu lwalawo amukela imali ye-ZAR lapha ukuze kube lula kuwe ukukhetha.
Ukudlala emakhasino e-inthanethi kudinga ukuthi wenze amadiphozithi futhi ukudiphozitha ngekhadi lakho le-debit kungenye yezindlela ezisheshayo futhi ezilula kakhulu zokwenza lokho. Asikho isidingo se-ejenti, izinkokhelo ziyashesha futhi uma ukwazi ukulonda inombolo yekhadi lakho ngokudlala emakhasino ahloniphekile kuphela, futhi inqubo iphephile. Qala ukudlala emakhasino ekhadi le-debit namuhla uzibonele ukuthi kulula kanjani.
Amakhasino aseNingizimu Afrika amukela izinkokhelo ngamakhadi e-debit
Kunamakhasino ambalwa kakhulu kulezi zinsuku angamukeli izinkokhelo ngamakhadi e-debit, ikakhulukazi eNingizimu Afrika. Njengoba izinkokhelo zishesha kakhulu futhi kunengozi encane yokubuyiselwa okukhokhile, amakhasino e-inthanethi amaningi akhuthaza abadlali bawo ukuthi basebenzise amakhadi e-debit ngokubanikeza amabhonasi akhethekile, futhi ikhuthaza ngisho nabadlali ukuthi basebenzise indlela efanayo ukukhipha imali. Izikhathi zokukhipha imali ngekhadi le-debit zingathatha phakathi kosuku olulodwa kuya kweziyisihlanu.
Ngakho-ke ulisebenzisa kanjani ikhadi le-debit lakho ekhasino ye-inthanethi? Wake waqaphela kulezi zinsuku ukuthi amakhadi e-debit aqala ukubonakala njengamakhadi esikweleti? Kunesizathu esihle kakhulu salokho, okungukuthi, ukuze zisetshenziswe ekuthengeni online. Ukuze usebenzise ikhadi lakho le-debit ekhasino ye-inthanethi eyamukela izinkokhelo ngekhadi le-debit, vakashela ikhasi likakheshiya. Ohlwini lwezindlela zokukhokha, khetha ikhadi le-debit bese ugcwalisa ifomu, kubandakanya igama lakho, inombolo yekhadi, usuku lokumisa ikhadi kanye nezinombolo ezintathu zokugcina ngemuva kwekhadi. Uma wake wenza idiphozithi ngekhadi lesikweleti ekhasino ye-inthanethi, lokhu kuzoba lula kuwe.
Qinisekisa ukuthi ufaka inani ofuna ukulifaka bese ubuza ikhasino ukuthi ufanelekile yini ukuthola ibhonasi kudiphozi yakho yekhadi le-debit. Uma ungaqinisekile ukuthi uzoqala kuphi, funda uhlu lwethu lwamakhasino ahamba phambili amukela ikhadi le-debit ngezansi.
Izinzuzo zokusebenzisa ikhadi le-debit
Enye yezinto ezikhathaza abantu kakhulu ngokusebenzisa amakhadi abo e-debit ukuphepha. Ngokwanda kokukopisha amakhadi okwenziwa eNingizimu Afrika, kanye nezinye izinkinga ezihambisana nama-pin ekhadi le-debit antshonsthiwe, abantu abaningi abafuni ukunikeza imininingwane ye-akhawunti yabo yasebhange. Ngokumangazayo, amakhadi e-debit ayizindlela eziphephile kakhulu zokudiphozitha imali ekhasino ye-inthanethi, nesheshayo.
Amakhadi e-debit asebenza ne-akhawunti yakho yasebhange, ngakho-ke ngokungafani nekhadi lesikweleti okuzodingeka ulikhokhe, noma yiziphi izinkokhelo ozenzayo ikhadi lakho le-debit liqukethe imali yangempela evela ku-akhawunti yakho yasebhange. Lokhu kusho ukuthi uma ukhipha imali ekhasino, imali ingena ngqo esikhwameni sakho, kunokuba iye ebhange ukuyokhokha isikweleti. Futhi, ukusebenzisa ikhadi le-debit ukudlala ekhasino laseNingizimu Afrika kubeka umkhawulo emalini oyisebenzisayo. Asikho isidingo sokukhathazeka ngokusebenzisa imali ngokweqile nangokuzifaka esikweletini. Lapho umkhawulo wakho wansuku zonke usufinyelelwe, awukwazi ukwenza amanye amadiphozithi.
Okukugcina, enye yezinzuzo zokusebenzisa amakhadi e-debit ukuthi iningi lamabhange aseNingizimu Afrika kulezi zinsuku awakhokhisi indleko ngokusebenzisa ikhadi kanye. Kunalokho, akukhokhisa imali yanyanga zonke yokugcina i-akhawunti yakho isebenza. Lokhu kusho ukuthi, ngokomqondo, ungadiphozitha ekhasino izikhathi eziyishumi ngosuku olulodwa ngaphandle kokukhokha imali eyengeziwe, kodwa uqaphele, lokhu kungatshela ibhange umyalezo wesexwayiso sokukhwabanisa.